MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYGA DOBIE-BASSET - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyga Dobie-Basset
Doberman Pinscher / Basset Hound ey isku dhafan oo isku dhafan
'Sawirka waxaa ka muuqda labo sano jir reerkeena ah oo lagu magacaabo Dobie-Basset, Jack. Jiridiisu wey weyn tahay oo kama baqayo eeyaha waaweyn, in kasta oo uu le'eg yahay Basset. Wuxuu helayaa dareen badan, wuxuu aadayaa socod, welina wuxuu leeyahay tamar badan. Wuxuu ka faa'iideystaa cunnada- oo lagu daaweeyaa alaabada ay ku ciyaaraan eeyga si uu mashquul ugu noqdo oo u joojiyo cunidda cuncunka badan. Isagu wuu isku dheelitiran yahay sida daaqda oo kale wuxuuna ku fiican yahay carruurta. '
Dobie-Basset ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Doberman Pinscher iyo Basset Hound . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Cheyenne the Basset Hound / Doberman Pinscher mix (Dobie-Basset) sida eey yar oo ah 4 toddobaad jir— 'Kani waa kan yar ee Cheyenne ah. Waxaan ka soo qaadanay My Fairy Dawg Mother Hound Rescue, Inc. Cheyenne iyo asxaabteeda qashinka ah waxaa laga helay sanduuq kartoon ah oo ku xigta qashin qubka 31 darajo. Indhahoodu waxay bilaabeen inay furmaan, markaa dhakhtarka xoolaha wuxuu yidhi waxay ahaayeen qiyaastii laba toddobaad markii la helay. Waxay ku jirtay caanaha carruurta yar yar ee loo yaqaan 'puppy formula' iyo 'puppy kibble' ilaa ay ka dhoweyd saddex bilood. Qaar ka mid ah asxaabta Cheyenne ayaan wali ka badbaadin dhaxanta qabow iyo soo gaadhista parvo, markaa anigu waan yara yaraaday oo waan ku sii dheereeyay iyada. ''
Cheyenne the Basset Hound / Doberman Pinscher mix (Dobie-Basset) sida eey - Mid ka mid ah waaliddiinta kale ee korsaday ayaa baaris DNA lagu sameeyay eeykooda, walaalkeed, Seamus, sababtoo ah waxay horey u lahaayeen Dachshund oo isna si dhakhso leh ayuu u koray, waxayna u noqotay sidii Basset iyo Doberman oo isku qasmay.
Cheyenne the Basset Hound / Doberman Pinscher mix (Dobie-Basset) sida eey - Waxay miisaankeedu yahay 54.9 rodol da'da sideed bilood. Waxay u egtahay qof Doberman laakiin leh lugaha gaagaaban, oo aan u gaabin sida lugaha Basset-ka caadiga ah waxayna leeyihiin jirka Basset ka dheer. Waxay leedahay shaqsiyad weyn. Iyadu waa qof aad u jecel, way fiicnaan kartaa waxayna jeceshahay inay la ciyaarto walaalkeed, Bo ( Foxhound ) iyo kaayaga bisad Abbigail, ama sariirteed uun ku salaax. Tababarka dheriga xoogaa wey adkaatay in cabbaar ah, laakiin hadda iyadu hoos ayey u dhacday. Waxay fadhiisataa albaabka dambe markay u baahan tahay inay bannaanka u baxdo. Iyadu waa sanduuq tababaran sidoo kale. Way jeceshahay calalin kabahaygii wali, TV-ga fog, taleefannada gacanta iyo wixii kale ee ku hadhay guriga hareeraheeda oo ay ogtahay inaysan ku calalin. Waxaan ka qaadaneynaa maqaalka ay heysato oo waxaan ku bedeleynaa mid ka mid ah waxyaabaha ay ku ciyaaraan halkii ay ka ahaan lahayd
Cheyenne the Basset Hound / Doberman Pinscher mix (Dobie-Basset) sida eey yar oo jira ilaa 8 bilood jir— Way fadhidaa, way timaaddaa waxaanan ka shaqaynaynay joogitaan, joog, hoos iyo jiif. Way yara adkaan kartaa, laakiin aakhirka way heli doontaa. Waxaan aqrinay oo adeegsanay qaar ka mid ah Cesar Millan's, Farsamooyinka Eeyaha Whisperer iyada. Waxay jeceshahay tagista gawaarida gawaarida iyo socodka waxayna kufaraxsan tahay xarigga eeyga. Way ila joogtaa aniga, weligeed ma baadi meyso meel fog. Waxay jeceshahay inay la ciyaarto eeyaha kale. '
Cheyenne the Basset Hound / Doberman Pinscher mix (Dobie-Basset) sida eey yar oo jira ilaa 8 bilood jir— 'Cheyenne wuxuu jecel yahay inuu ku ciyaaro biyaha. Nasiib darrose ma awoodo ama ma aysan ogaan sida loo dabaasho weli. Waxay u degtaa sida dhagax oo kale, taas oo aniga aniga aniga cabsi badan igu haysa, sidaa darteed waxaan uga fogaanayaa iyada iyo qaybtaas baarkinka eeyga. Iyadu waa wax la yaab leh oo ku soo kordhay qoyskeenna. Aad ayey u cabsi badan tahay carruurtayada ay ayeeyoyada u yihiin oo da'doodu u dhexeyso 2 sano jir ilaa 11 sano jir, oo waxba kama iibin doonno! Xaqiiqdii waa gabadh Mama ah! Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko inta ay le'eg tahay (dhererkeedu) iyo inta ay aakhirka miisaami doonto markay weynaato. Lugaheeda waa toosan yihiin mana laha cagaha soo noqnoqda ee Bassets qaarkood leeyihiin. '
Liiska eeyaha Doberman Pinscher Mix brewed
Liiska eyda Basset Hound Mix
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Dogue de Bordeaux
Alaunt Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Bull-Aussie Dog
Ma rabtaa inaad eygaaga dhalo?
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyga ee loo yaqaan 'Yorkipoo Dog'
Macluumaadka Taranka Eeyaha Papi-poo iyo Sawiro
Macluumaadka iyo Sawirada Noocyada jilicsan ee Dahaarka leh ee loo yaqaan 'Wheaten Terrier Dog Dog'
Bo-Jack Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Liiska Noocyada Molossers
Rafaa isku darka in Yeeyi Cunto malamute Alaska
bulldog ingiriisiga qasan feeryahanka
injirta eygu sidee u egtahay
shiine yorkie isku darka iibka eeyaha
sawirada eyda weyn ee loo yaqaan 'pyrenees dogs'
jack russell iyo chihuahua isku qasan
st Bernard isku darka collie soohdinta